Omume Kachasị Mma Maka Immejuputa Ndepụta Oku Na-agabiga Usoro Atụmatụ Gị | Martech Zone
Kpọọ nsuso bụ teknụzụ guzobere ugbu a na-ebigharị isi. Site na ịrị elu nke smartphones na onye ahịa mkpanaka ọhụụ, ikike ịkpọ oku na-aghọwanye ihe na-adọrọ adọrọ na ahịa nke oge a. Dọ aka ná ntị ahụ bụ akụkụ nke ihe na-akpata mmụba nke 16% kwa afọ na mbata inbound na azụmaahịa. Mana n'agbanyeghị mmụba nke oku na mgbasa ozi mkpanaka, ọtụtụ ndị na-ere ahịa ka na-awụlikwa elu na oku na-eso ụzọ dị irè ahịa ahịa na-na-na a na ọnwụ dị ka otú gbaa a dị mkpa akụ na smart marki si akpa.
Imirikiti ndị isi ụlọ ọrụ na-anwa ịlele ịma aka ntụgharị ntụgharị site na nghọta dị ukwuu nke mgbasa ozi dị ma ọ bụ na-anaghị akwụ ụgwọ. Ma ọ nweghị ihe ngwọta na-abịaru nso inweta ike, nnweta na ịdị mfe nke ojiji nke usoro ikpo okwu ọkpụkpọ nke oge a na-enye. N'ihe banyere itinye usoro nlekota oku n'ofe usoro ahia ha, ulo oru kwesiri iburu n'uche omume ndi a kachasi nma iji nyochaa usoro ahia ma weputa ihe omuma bara uru:
Dika nyocha ohuru ohuru si Shop.org na Forrester Research, Steeti nke Retailing Online, njikarịcha mkpanaka bụ ihe kacha mkpa maka ndị na-ere ahịa. Addiction addictionụ ọgwụ ọjọọ nke ndị na-eri ihe na-eme ka ihe na-akpali akpali na oku na-abata, na-eme ka ịkpọ oku bụrụ ihe dị mkpa nke atụmatụ ọnụọgụ dijitalụ savvy. Ebe ọ bụ na smartphones bụ ugbu a ụzọ iji nweta n'ihu ndị a azụmahịa-njikere ahịa, optimizing gị mobile website bụ ihe dị oké mkpa nzọụkwụ kwupụta oku nsuso mmejuputa iwu.
Site na itinye nọmba ekwentị ọpụrụiche pụrụ iche na mkpọsa ahịa ahịa ọ bụla, ọrụ nsuso oku nwere ike ịchọpụta isi mmalite ndị na - akwọ oku gị. Ọkwa nghọta a na-enye ndị azụmaahịa aka ịma mgbasa ozi ọkọlọtọ, bọọdụ mkpọsa, mkpọsa mmekọrịta ma ọ bụ mgbasa ozi PPC dọtara ndị ahịa iji kpọọ. Pịa ịkpọ oku CTA (Oku Iji Mee Ihe) na-echetara anyị na ngwaọrụ ndị anyị jidere aka anyị ka bụ ekwentị, nwere ike ijikọ anyị na nwa oge na azụmaahịa anyị na-ele.
Keywords na Data-Chụpụrụ Azụmaahịa
Enginezụ ahịa igwe nchọgharị (SEM) na-aga n’ihu ijide oke n ’ahịa azụmaahịa ọnlaịnụ. Dị ka nsuso oku na-abata, nsuso ọkwa nke isiokwu na-emepụta nọmba ekwentị pụrụ iche maka isi okwu isiokwu ọ bụla n'ime ọchụchọ, na-enye ohere azụmaahịa ka ha daba na ọkwa isiokwu ọchụchọ nke onye ọ bụla ma jikọta oku na ndị ọbịa weebụ yana omume ha na saịtị ahụ. Marketingre ahịa data bụ ihe dị mkpa maka azụmaahịa ndị na-achọ ịgbasa ọwa ahịa ha gafere ndị na-ajụ dijitalụ. Ọ bụ ezie na ọtụtụ obere azụmaahịa na-eche na ha ga-enweta visibiliti site na web nchịkọta naanị ha, ha na-elegharakarị ike nke oku dị mkpa mgbe niile.
Ngwakọta CRM & Nchịkọta
Ijikọ oku ekwentị nchịkọta bụ otu n'ime ụzọ dị mkpa azụmaahịa ga-esi nweta nghọta miri emi banyere ahịa. Site na ịmekọrịta azịza oku ha na ngwanrọ ha dị ugbu a, azụmaahịa nwere ike ịnwe usoro njikọta ọnụ nchịkọta iji nweta uru. Mgbe elere data anya na ntanetị nchịkọta, ụlọ ọrụ achụmnta ego pụrụ inweta echiche zuru ezu banyere mmefu mgbasa ozi ha, na-enye ha ohere ịhụ ihe na-arụ ọrụ ma dozie ma ọ bụ wepụ ihe na-adịghị. Nghọta ndị a na - enyere ndị azụmaahịa aka belata ọnụ ahịa ọ bụla, gbanwee oku gaa ụzọ ruru eru ma bulie ROI nke mbọ ahịa.
At Kpọọ oku, oku na-aga nsochi na nchịkọta n'elu ikpo okwu, anyị na-enyere ndị nwe ụlọ ahịa aka ịchọpụta ụdị mkpọsa ahịa na isiokwu ọchụchọ na-anya oku ekwentị bara uru. Onye ahịa anyị National Builder Supply mejuputara ọrụ nsuso oku anyị wee nwee ike belata mgbasa ozi PPC na-etinye 60% ma ka na-echekwa otu ahịa ahụ. Companylọ ọrụ ahụ nwekwara ike ịdọrọ ngwaahịa ndị na-adịghị agbanwe agbanwe site na atụmatụ ahịa ha n'ihi nghọta ha nwetara site na CallRail.
CallRail emeela n'ezie ihe dị iche maka anyị. M ugbu a nwere a siri ike foto nke ahịa, revenue na oke Attribution. Adịkwaghị m enye ndị mgbasa ozi na-eme ihe na-adịghị mma; Enwere m ike ịkwụsị mmefu ahụ. CallRail nyere anyị ozi ikpeazụ anyị chọrọ iji mee ka nke a mee. David Gallmeier, Ahịa na mmepe maka NBS
Oku oku nyocha egosila na ọ dị oke mkpa maka ahụmịhe ndị ahịa ka mma, ọzụzụ zuru oke n'ime, ịre ahịa data, na mkpebi ọgbọ ọgbọ. Site na itinye usoro nlekota oku n'ime usoro ahia ha, ulo oru nwere ike inyere aka mechie akuku ROI n'emebighi ego. Trackingkpọ oku nwere ike inyere ndị azụmaahịa aka ịmalite itinye uche na mkpọsa ahịa na - arụ ọrụ - ma kwụsị imefusị ego na ndị na - anaghị arụ ọrụ.
Bido ule nnwale efu gị
Tags: oku na-esochiokuịkpọ oku mkpọsamkpọsa-ọkwa larịị nsusoahia na-achuta dataisiokwu oku nsusoekwentị mkpanaaka nsochi
Lance Weatherby Thursday, July 9, 2015 Friday, May 21, 2021
Lance Weatherby bụ osote onye isi nke Ahịa na Ahịa na Kpọọ oku. Ọ nwere agụụ maka iwulite ụlọ ọrụ ịntanetị na-elekwasị anya na ndị ahịa yana ndekọ gosipụtara nke mmezu. O jere ozi dị ka mmalite Catalyst na Advanced Technology Development Center na Georgia Tech ma nwee njikwa azụmaahịa azụmaahịa, azụmaahịa na njikwa njikwa n'ozuzu na nCrowd, CipherTrust, EarthLink, na MindSpring.
Ọ bụrụ na Ser Na-eje Ozi Narị Afọ Iri, Bet Ka Mma Ijere Video
Stamplia: Zụrụ ma ọ bụ Wulite Template Email Gị Mfe
Sep 9, 2015 na 11: 10 AM
Ekwenyere m. Oku oku bu ihe ahia ahia. Anyị na-eji sistemụ egwu egwu Ringostat. Ugbu a anyị maara nke ọwa mgbasa ozi na-eweta ọtụtụ ego anyị na-enweta na nke bụ ego efu. Ndị ahịa anyị na-arụ ọrụ eritekwala uru site na oku ndekọ ya. Na mkpokọta, anyị nwere obi ụtọ na mpempe ngwanrọ a.